Niala ilay Kandidà Voalohany Avy Amin’ny LGBT Ho Ao Amin’ny Kongresy Ao Shily · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jona 2013 8:41 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Dansk, Español, English
Hoy ny bitsika nalefany (@valeverbal) [es] :
Isan'ny dingan'i Shily ho amin'ny fitovian-tsaranga firotsahan-ko fidian'i Verbal. Nifidy voalohany tamin-kalalahana ilay politisiana lahy manambady lahy ho mpanolo-tsaina monisipaly i Shily ny ririnina farany teo. Lalàna iray vaovao vao avy nolaniana no mandràra ny herisetra atao amin'ny vondrom-piarahamonin'ireo LGBT , ireo olona mitovy nefa mifanambady sy ireo maro hafa. Kanefa mbola mitohy ny herisetra. Ny fahazoana solontena maro avy ao amin'ny LGBT no làlana iray hahatongavana amin'izany, hoy i Verbal.
Teo ambany fifehezan'ny lalàn'i Zamudio, nampiakarin'ireo vehivavy mifanambady teny amin'ny fitsarana ireo mpiray vodirindrina aminy, roa herinandro lasa izay, araka ny voalazan'ilay bilaogy ” Homosexual Integration and Liberation” (Movilh [es]).
Hoy ny voasoratra tao amin'ilay blaogy [es] hoe :